Sary Avy Any Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2017 5:03 GMT
Inona no mitranga rehefa mihaona ny mpihazakazaka, ny mpaka sary sy ny mpanoratra ary manapa-kevitra ny hihazakazaka mihoatra ny 600 km isam-bolana ao amin'ny fanjakana Indiana ao Kerala izy ireo? Ny valiny dia …… bilaogy iray tena mahafinaritra . Manao izany fotsiny i Peter Dulvy, Desmond Roberts ary Rahul Noble Singh ao amin'ny bilaoginy ‘Heels of Fire‘ raha manazava momba ilay antsoin'ny National Geographic hoe iray amin'ireo paradisa folo eto an-tany. Misy ihany koa ireo sary mahafinaritra. Ary manana tranonkala mahaliana ihany koa izy ireo.
Manolotra antsika ny andiana sary maromaro ny fandaharan'asan'ny The Athanasius Kircher Society izay mampiseho ireo moanina Bodista mamorona sary hosodoko fasika mandala mandritra ny 10 andro ary ny fanapotehina izany avy eo.
Farany fa tsy ny kely indrindra, manolotra antsika ny zavakanton'ny kamiao maroloko avy any Pakistan i BabaSteve. Hoy izy nanampy,